samsung kumusika s21 fe sechirevo 20 chinotsiva zvichitevera kushaya simba kweyegalaxy s21 kutengesa
Kuru Nhau & Ongororo Samsung kushambadza S21 FE seCherechedzo 20 kutsiva zvichitevera kushomeka kwekutengesa kweGPS S21
Hakuzovi ne Galaxy Note 21 . Pamwe nekuti Samsung iri kusundira zvakapetwa uye pamwe nekuda kwekushomeka kwenyika chip. Asi chirevo chitsva chinoratidza kuti kambani iri kuronga mumwe mutsivi mumweya.
Iyo Galaxy S21 FE inogona kunge iri yekutevera yeGlass
Evan Blass inoshuma kuti Samsung iri kuronga kuisa zviri kuuya Galaxy S21 FE semutsivi weGlass Note 20 akateedzana kwete iyo Galaxy S20 FE, chimwe chinhu chinoratidzika kuratidza kukosha kwemuenzaniso kana zvasvika pakutengesa.
Mufananidzo wakagovaniswa mukupindura kune yekutanga kutumira inoratidza kushushikana kweSamsoni neiyo Galaxy S21 Kuita kusvika pari zvino. Kutengesa vhoriyamu yeiyo 2021 mireza iri 30% yakaderera pane izvo iyo Galaxy S10 akateedzana akasangana makore mashoma apfuura.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti idzi nhamba dzinoshungurudza dzakawanikwa mune imwe nguva apo Samsung yakatarisana nemakwikwi mashoma kwazvo kupfuura zvakajairwa, kunyanya ichienzaniswa ne2019.Huawei iri kunze kwemufananidzo kunze kweChina, nepo Xiaomi naOppo vachiri kunetseka mumusika weprimiyamu.
Iyo Galaxy S21 yakateedzana yakatangisawo mwedzi pamberi pekare, zvichireva kuti iwo chete mukwikwi chaiwo wemwedzi miviri yekutanga yaive Apple's iPhone 12 nhevedzano, iyo ine yakaitwa mushe mushe sezvo yakarova masherufu muna Gumiguru naNovember.
Samsung iri kubheja pane iyo Galaxy Z mutsara
Kushambadzira iyo Galaxy S21 FE sekutsiva kweGlass Note kunogona kuita senge kusanzwisisika kana iwe uchifunga chokwadi chekuti haizopa yakavakirwa muS Pen kana kuita sepamberi mureza, kunyangwe ikaramba ichingova imwe chete ye mafoni akanakisa eApple muna 2021 .
Asi tinotarisira kuti Samsung ichagonesa S Pen stylus rutsigiro parunhare uye nekumisikidza seyakanaka kukwidziridzwa kwevatengi vachishandisa ekare maGreen Note mamodheru senge iyo Galaxy Note 9 kana Galaxy Note 8.
Kufamba uku kunoreva zvakare kuti Samsung ingangokwanisa kushandisa yakawandisa zviwanikwa zvekushambadzira pane zvakapetwa Galaxy Z Peta 3 uye Galaxy Z Flip 3 . Aya majaira haazove anozivikanwa seyeiyo Galaxy S21 mutsara, asi a hefty yekutengesa tarisiro zvakadaro yakaiswa.
lg v10 vs s7 kumucheto
Google Nexus 6P vs Samsung Galaxy Note5 vs Apple iPhone 6s Plus: specs kuenzanisa
Ugreen kutanga Prime Day kutengeswa: sevha 25% pamajaja, tambo, zvishongedzo!
Kutengesa kutsva kutsva kunounza iPhone 8 Plus uye 7 Plus kudzika pamapengo epasi mitengo (yakagadziridzwa)
Motorola Moto Z3 Play haina & apos; haina 3.5mm headphone jack, asi inouya neadapter
Kufamba Kwevakafa: Hakuna Munhu & apos; s Land kugadzirisa inowedzera mepu nyowani, yakawanda yekuvandudza
Yakarasika Samsung nhare zvino inogona kuwanikwa kunyangwe isingaenderane